Ny World Tourism Network dia nametraka fironana 2021 nahatonga ny mpitondra hitsambikina
Home » Travel Associations News » Ny World Tourism Network dia nametraka fironana 2021 nahatonga ny mpitondra hitsambikina
Janoary 1, 2021
The Tambajotra fizahan-tany manerantany nandalo ny lelan'ny fanantenana avy amin'ny firenena isan-firenena tamin'ny fetin'ny Taombaovao androany nihaino ny tantara tsy nampoizina notantarain'ireo mpitarika fizahan-tany.
Ny mpizahatany no fototry ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany.
Ny World Network Network (WTN) dia maniry ny hisondrotra matanjaka kokoa hatrany ireo mpitarika fizahan-tany.
Juergen Steinmetz, mpanorina ny WTN: "Faly be izahay manana an'ireto mpamily tsy miankina amin'ny indostrianay ireto mankalaza ny faha-35 taonan'ny Fikambananan'ny Mpiambina ny mpizahatany (WFTGA)."
Mpijery an'arivony ao amin'ny eTurboNews tambajotra, haino aman-jery sosialy, ary ireo izay nanatrika ny hetsika virtoaly Taom-baovao tamin'ny zoom dia nandany fotoana nahafaly ary nandihy ny fahasosoran'izy ireo tamin'ny taona 2020 mba hitsena ny taona fanantenana, taona 2021.
Ny mozika fety tsy mampino dia nahatonga ny olona handeha. Nanentana ny aingam-panahy ny fitantaran'ny mpitari-dia avy any Russia, Iran, Costa Rica, Sipra, Afrika atsimo ary Etazonia.
Inona ny ampahany amin'ny pelaka ao Washington DC? Tsy misy fanavakavahana ao amin'ity indostrian'ny fandriam-pahalemana sy fitoviana ity.
Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha dia niditra tao amin'ny antoko avy any Espana miaraka amin'ireo olo-malaza avy any Arabia Saodita, Etiopia, Jordania, Serbia, Aostralia, Alemana, Italia, ary firenena maro hafa.
Dr. Rifai dia nanentana ny sekretera jeneralin'ny fikambanana fizahan-tany manerantany (UNWTO) amin'izao fotoana izao mba hanao lalao ara-drariny ho valin'ny fanangonan-tsonia WTN hamerina amin'ny laoniny ny fahamendrehana ao amin'ny UNWTO
Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina nanazava ny fahafaha-manao ho an'ny kaontinanta afrikanina.
Dr. Peter Tarlow, mpiara-manorina ny World Tourism Network dia niresaka momba ny maha-zava-dehibe ny fiarovana sy ny fiarovana ankoatry ny COVID-19
Fotoanan'ny fety io ary i Maricar Donato avy any Washington Tours & Events no tao ambadik'io. Izy koa dia masoivohon'i WFTGA ary natao vao haingana a maherifo amin'ny fizahantany nataon'i WTN
Ny World Tourism Network dia nahavita iray volana iray volana desambra naneho tokana renirano hetsika Zoom shetsika ataon'ny mpikambana WTN. WTN dia manana mpikambana ao amin'ny firenena mpikambana 124 ary mikendry ny ho feo vaovao ho an'ny maro izay tsy nanana feo tao amin'ny indostria teo aloha. Ny WTN ihany koa no vintana ahafahan'ny mpitondra vaovao manatevin-daharana ireo efa tafaorina amin'ny dingan'ny fanarenana.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny WTN sy ny fidirana amin'ny mpikambana www.tv.travel
UNICEF momba ny ho avin'ny ankizy eto amin'ity izao tontolo izao ity
Inona ny tohin'ny fizahantany Malaysia?
15 minitra lasa izay